ကြှနျုပျတို့အကွောငျး - BullyingCanada
ကြီးမားသောလက်ဆောင်များ & Securities
အမှတ်ရစရာ အမွေအနှစ်တစ်ခု ချန်ထားခဲ့ပါ။
BullyingCanada ကွဲပြားမှုကို ဖြစ်စေသည်။
BullyingCanada အနိုင်ကျင့်ခံရသည့်လူငယ်များအတွက် ပိုမိုတောက်ပသောအနာဂတ်ကို ဖန်တီးပေးရန် တစ်ခုတည်းသော အမျိုးသားအနိုင်ကျင့်မှုဆန့်ကျင်ရေး ပရဟိတအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ငယ်ရွယ်သူများ ဖန်တီးထားသည့် ဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုအနေဖြင့် စတင်ခဲ့ရာက အနိုင်ကျင့်ခံရသည့်ကလေးများကို စုစည်းပြီး အနိုင်ကျင့်ခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ပေးဆောင်ခြင်း—နှင့် မည်သို့ရပ်တန့်ရမည်နည်း!—ယခုအချိန်တွင် အပြည့်အဝ 24/7 ပံ့ပိုးကူညီမှုဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ နှစ်တစ်နှစ်၏ မည်သည့်နေ့တွင်မဆို အချိန်မရွေး၊ လူငယ်၊ မိဘများ၊ နည်းပြများနှင့် ဆရာများက ကျွန်ုပ်တို့အား ဖုန်း၊ စာတို၊ အွန်လိုင်း ချတ်နှင့် အီးမေးလ်ဖြင့် ဆက်သွယ်၍ အနိုင်ကျင့်မှုကို ရပ်တန့်စေမည့် နည်းလမ်းကို အကူအညီရယူပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပံ့ပိုးကူညီရေးအဖွဲ့တွင် လေ့ကျင့်သင်ကြားထားသော စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရာပေါင်းများစွာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသောခြားနားချက်: BullyingCanada သူတို့ရဲ့ အနိုင်ကျင့်မှုကို အဆုံးတိုင်အောင် မစွမ်းဆောင်နိုင်မချင်း အကူအညီတောင်းသူတွေဘက်က ရပ်တည်ပေးတယ်။ အနိုင်ကျင့်မှု ဖြစ်ပွားမှုတိုင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ အာရုံစိုက်မိသော၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အနိုင်ကျင့်ခံရသော လူငယ်များနှင့် ၎င်းတို့၏ မိဘများနှင့် စကားပြောဆိုခြင်း၊ အနိုင်ကျင့်သူများနှင့် ၎င်းတို့၏ မိဘများ၊ ဆရာများ၊ နည်းပြများ၊ လမ်းညွှန်အကြံပေးများနှင့် ကျောင်းအုပ်များ၊ ကျောင်းဘုတ်များ; ကလေးအသက်အန္တရာယ်ခြိမ်းခြောက်ခံရပါက ဒေသခံရဲ၊ လူငယ်များ ကုသရန် လိုအပ်သော အကြံဉာဏ်များ ရရှိစေရန်နှင့် ဒေသတွင်း လူမှုရေး ဝန်ဆောင်မှုများ။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် နှစ်ပတ်မှ တစ်နှစ်ကျော်အထိ ကြာတတ်သည်။
အနိုင်ကျင့်မှု ဆန့်ကျင်ရေး ကြိုးပမ်းမှုများတွင် တက်ကြွသော ကျောင်းသားများအား အနိုင်ကျင့်မှုနှင့် ပညာသင်ဆုများအကြောင်း ကျောင်းတင်ပြချက်များကိုလည်း ပေးပါသည်။
BullyingCanada သူတို့ဖန်တီးထားတဲ့ ဝဘ်ဆိုဒ်ကို အသက် 17 နှစ်အရွယ် Rob Benn-Frenette, ONB နဲ့ အသက် 2006 နှစ်အရွယ် Katie Thompson (Neu) တို့က ဒီဇင်ဘာ 17 ရက်၊ 14 မှာ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ရော့နှင့် ကေတီ နှစ်ဦးစလုံးသည် ၎င်းတို့၏ မူလတန်းနှင့် အထက်တန်းကျောင်းနှစ်များအတွင်း အလွန်အမင်း အနိုင်ကျင့်ခြင်း၏ သားကောင်များ ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့သည် အကူအညီတောင်းခံသော်လည်း ပရဟိတ သို့မဟုတ် လူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုကို ကြားဝင်စွက်ဖက်ရန်နှင့် ၎င်းတို့အား မဆုတ်မနစ်ညှဉ်းဆဲခြင်းမှ ရပ်တန့်ရန် မတွေ့နိုင်ခဲ့ပါ။ ဒါကြောင့် ဖန်တီးခဲ့ကြတာပါ။ BullyingCanada နာကျင်နေတဲ့ ကလေးတွေကို ကူညီဖို့။
BullyingCanada ကနေဒါနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ သတင်းစာများ၊ မဂ္ဂဇင်းများ၊ ရေဒီယိုနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားများတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်—အစရှိသော ဘာသာစကားမျိုးစုံဖြင့်၊ ကမ္ဘာလုံးနှင့်မေးလ်, စာဖတ်သူများ Digest, ယနေ့ခေတ် မိဘ၊ နှင့်အခြားများစွာ။ Rob နှင့် Katie တို့သည် ၎င်းတို့၏ မပျင်းမရိကြိုးစားမှုများကြောင့် လူသိရှင်ကြား အကြိမ်များစွာ အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရသည်။
ကလေးများအတွက် လိုအပ်သော အရင်းအမြစ်များ တည်ဆောက်ခြင်း၊
ကျွန်ုပ်တို့၏တည်ထောင်သူများသည် ကြီးထွားလာကြသည်။ BullyingCanada နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာအဖြစ်။
ကေတီနှင့် ရော့ဘ်တို့ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ BullyingCanada ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ၎င်းတို့သည် မိမိတို့၏ အစွန်းရောက် အနိုင်ကျင့်မှုကို ဇွဲနပဲ ခံနေကြရသည်။
တည်ငြိမ်သော ရင်းမြစ်တစ်ခုထက်ပိုသော အချက်အလက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးလိုသောအားဖြင့် Rob နှင့် Katie တို့ မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။ BullyingCanada လိုအပ်နေသော လူငယ်များကို တိုက်ရိုက် ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးစွမ်းနိုင်စေရန် လုပ်ဆောင်နေသော ပရဟိတ လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
82991 7897 RR0001
ရုံးချိန်မလိုက်နာဘူးဆိုတာ သိလျက်နဲ့၊ BullyingCanada လူငယ်များသည် ၎င်းတို့လိုအပ်သောအကူအညီကိုရရှိရန် လေ့ကျင့်သင်ကြားထားသောစေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့်အတူ 24/7/365 ပံ့ပိုးကူညီမှုလိုင်းကို စတင်လိုက်ပါသည်။
နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင် အနိုင်ကျင့်ခံရသော လူငယ်များနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုများအတွက် တစ်သက်တာ အတွေ့အကြုံနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုတို့ကို ယူဆောင်လာပါ။
Katie Thompson (Neu)
ကေတီနှင့် ရော့ဘ်တို့သည် အပြန် အလှန်သူငယ်ချင်းများမှတစ်ဆင့် တွေ့ဆုံစဉ်တွင် ကေတီသည် အသက် ၁၄ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည်။ Katie သည် ကြီးပြင်းလာစဉ်တွင် အလွန်အမင်း အနိုင်ကျင့်ခြင်း၏ သားကောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ သေစေမည့် ခြိမ်းခြောက်မှုများ ခံရကာ ကဲ့ရဲ့ခံရကာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုများ ကြုံခဲ့ရသည်။ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းသူများထံမှ လုံခြုံသော ခိုလှုံရာကို ရှာမတွေ့သဖြင့် သူမသည် ၉ တန်းအောင်ပြီး အထက်တန်းကျောင်းမှ ထွက်ခဲ့သည်။
သူတို့လို တခြားအနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့ ကလေးတွေကို ကူညီဖို့ သူမနဲ့ Rob က စတင်ခဲ့ပါတယ်။ BullyingCanada ဝဘ်ဆိုဒ်ပုံစံ။ သူမသည် ယခင်က အနိုင်ကျင့်ခံရခြင်းကို ဆန့်ကျင်သည့် အတွေ့အကြုံမရှိခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင်ပင် ဆက်လက်၍ အနိုင်ကျင့်ခံခဲ့ရသည်။ BullyingCanada ဝဘ်ဆိုဒ်ကို စတင်ခဲ့သည်။
သူမနှင့် Rob တို့သည် Co-Executive Director ၏ အခန်းကဏ္ဍကို မျှဝေခဲ့သည်။ BullyingCanada. ခိုင်မာသောပံ့ပိုးကူညီမှုကွန်ရက်တစ်ခုကို တည်ဆောက်နေစဉ်တွင်၊ Katie သည် အွန်လိုင်းသင်ယူမှုမှတစ်ဆင့် Ontario အလယ်တန်းကျောင်းဆင်းလက်မှတ်ကို ရရှိခဲ့သည်။ သူမသည် စိန့်လောရင့်ကောလိပ်မှ ရာဇ၀တ်စိတ်ပညာနှင့် အပြုအမူဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ဖြင့် ဘွဲ့ရခဲ့သည်။ သူမသည် Rob နှင့်အားလုံးတို့ကဲ့သို့ ASIST (Applied Suicide Intervention Skills Training) certified လည်းဖြစ်သည်။ BullyingCanada's Support Team စေတနာ့ဝန်ထမ်း။
Katie ရဲ့ လက်ရှိပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ BullyingCanada အချိန်ပိုင်း၊ အီးမေးလ်များနှင့် တိုက်ရိုက်ချတ်တောင်းဆိုမှုများကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် အနိုင်ကျင့်ခံရသောကလေးများ။ တင်ဆက်သူအများအပြားထဲမှ တစ်ဦးအနေဖြင့် Katie သည် အနည်းငယ်လုပ်ဆောင်သည်။ BullyingCanada နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကျောင်းမိတ်ဆက်ပွဲများ။ သူမသည် အနိုင်ကျင့်မှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ စာအုပ်များကိုလည်း သုံးသပ်သည်။
Katie သည် သူမ၏မွေးရပ်မြေဖြစ်သော North Perth Chamber of Commerce မှ တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးအဖြစ် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။
Rob Benn-Frenette၊ ONB
Rob နှင့် Katie Thompson (Neu) တို့ စတင်ထုတ်လုပ်စဉ်က 17 ခုနှစ်တွင် အသက် 2006 နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည်။ BullyingCanada.
ဦးနှောက်ချို့ယွင်းသောရောဂါဖြင့် မွေးဖွားလာကာ သူ၏ ပုံမှန်မဟုတ်သော လမ်းလျှောက်ခြင်းသည် သူ့အား စာသင်နှစ်တစ်လျှောက်လုံး မညှာမတာ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း၏ ပစ်မှတ်ဖြစ်လာစေသည်။ ကန်သွင်းခြင်း၊ ခလုတ်တိုက်ခြင်း၊ တွန်းချခြင်း၊ တံတွေးထွေးခြင်း၊ နာမည်ခေါ်ခြင်း၊ စီးကရက်မီးခြစ်ဖြင့် မီးရှို့ခံရခြင်း၊ ရွေ့လျားနေသော ဘတ်စ်ကားရှေ့တွင် ပစ်ချခြင်းအပါအဝင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားမှုများကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ မဆုတ်မနစ်အနိုင်ကျင့်မှုကြောင့် သူ့ကျောင်းစာတွေကို အာရုံမစိုက်နိုင်ဘဲ အိပ်မက်ဆိုးတွေ၊ ညချွေးထွက်များပြီး ထိတ်လန့်တကြား တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့အတူ၊ သူ့အသက်ကို သတ်ဖို့ နှစ်ခါကြိုးစားတယ်။ အမည်မသိ တစ်ကြိမ်တစ်ခါ တယ်လီဖုန်းဖြင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းတွင် ပြေလည်မှုမရရှိခဲ့ပေ။
နှိပ်စက်ခံရမည့်အစား အတွင်းစွမ်းအားကို စုဆောင်းခဲ့သည်။ သူကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို တခြားကလေးကို မဖြတ်သန်းချင်တော့ဘဲ အနိုင်ကျင့်ခံရသူလည်းဖြစ်တဲ့ အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် Katie Neu နဲ့ လက်တွဲခဲ့ပါတယ်။
သူတို့သည် ကနေဒါသမိုင်းကို ရှည်ကြာအောင် ပံ့ပိုးပေးမည့် အမျိုးသားလူငယ်ဖန်တီးသော ပံ့ပိုးကူညီမှုဝန်ဆောင်မှုကို မွေးဖွားပေးသည့် ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုကို အတူတကွ လွှင့်တင်ခဲ့သည်။ အသက် 22 နှစ်အရွယ်တွင် Rob သည် New Brunswick ၏ Order in the Member of Honor ကို ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။
ယခု အသက်သုံးဆယ်ကျော်အရွယ်တွင် ကေတီ၏ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် ရော့ဘ်သည် ခိုင်မာသော အမျိုးသားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ သူသည် အကူအညီတောင်းခံမှုများကို အလှည့်ကျဖြေကြားပေးခြင်း၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းစုဆောင်းခြင်းနှင့် လေ့ကျင့်ပေးခြင်းများ၊ ကျောင်းတင်ပြချက်များကို ပေးပို့ခြင်းနှင့် နေ့စဉ် စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ရန်ပုံငွေရှာဖွေခြင်းဆိုင်ရာ တာဝန်အားလုံးကို စီမံခန့်ခွဲပါသည်။
(877) 352-4497 တယ်လီဖုန်း
(866) 780-3592 ဖက်စ်
471 စမစ်လမ်း၊ စာတိုက်ပုံး ၂၇၀၀၉
Fredericton၊ New Brunswick၊ E3B 9M1
Facebook က တွစ်တာ
ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ | သုံးစွဲမှုစည်းမျဉ်းများ | မီဒီယာအစုံနှင့် အမှတ်တံဆိပ်လမ်းညွှန်
© မူပိုင်ခွင့် ၂၀၀၉-၂၀၁၇။ BullyingCanada, Inc. မူပိုင်ခွင့်များ။ | ကုသိုလ်ဖြစ် မှတ်ပုံတင်နံပါတ်: 82991 7897 RR0001။
အသုံးပြုနိုင်စွမ်း Tools များ